အလုပ်သင်တန်းအစီအစဉ်များကိုရှာဖွေဖို့ကိုဘယ်လို | အဆိုပါ USAHello | USAHello
သင်အနီးတွင်အလုပ်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များကိုရှာတွေ့ဖို့လိုအပ်ပါနဲ့? သငျသညျအသစ်လုပ်ကျွမ်းကျင်မှုကိုသင်ယူချင်ပါနဲ့? သငျသညျအလုပျတဘို့လေ့ကျင့်သင်ကြားရနိုင်ပါသည်ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေအကြောင်းလေ့လာရန်.
သင်သည်မည်သည့်အလုပ်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များကိုစတင်ခင်မှာ, သငျသညျအခြေခံအလုပ်အဆင်သင့်ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်နိုင်ပါသည်. ဥပမာ, သင်ဖတ်နဲ့ရေးသားဖို့သင်ယူဖို့လိုပေမည်, ကွန်ပျူတာကိုသုံးပါ, ဒါမှမဟုတ်အလုပ်လျှောက်လွှာဖြည့်စွက်.
စာကြည့်တိုက်, ကြောငျး, နှင့်ရပ်ရွာစင်တာများကိုမကြာခဏဤအခြေခံကျွမ်းကျင်မှုသင်ပေးပရိုဂရမ်များ. ဒီတော့ချစ်ကြည်ရေးလို့ခေါ်တဲ့ပရဟိတမ. သင်အသုံးပြုအဝတ်နှင့်အိမ်ထောင်စုကုန်ပစ္စည်းများဝယ်နိုင်ဘယ်မှာချစ်ကြည်ရေးစတိုးဆိုင်များမြင်ကြပြီစေခြင်းငှါ. ချစ်ကြည်ရေးလူတွေကိုအလုပ်အတွက်အဆင်သင့်ရဖို့ကူညီခြင်းနှင့်အလုပ်ရှာရန်၎င်း၏စတိုးဆိုင်ကနေပိုက်ဆံကိုအသုံးပြုသည်. သူတို့ဟာအင်္ဂလိပ်နှင့်အခြားအခြေခံအတန်းပူဇော်. သငျသညျကိုသင်ယူနေချိန်မှာသူတို့ဟာကလေးစောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အတူကူညီစေခြင်းငှါ. တချို့နေရာတွေမှာ, Goodwill has specific job training programs, ထိုကဲ့သို့သောဘဏ်များအတွက်အလုပ်လုပ်နေများအတွက်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ဆေးရုံများအဖြစ်. ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းနှင့်ထောက်ခံမှုအဘို့သင့်ဒေသခံချစ်ကြည်ရေးကိုရှာပါ.
တိုင်းအသိုင်းအဝိုင်းကလူတွေအလုပ်ရှာဖွေရာတွင်ကူညီပေးမည့်အလုပ်စင်တာရှိပါတယ်. အမေရိကန်ကယောဘစင်တာများကိုအမေရိကန်အစိုးရအနေဖြင့်အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုဖြစ်ကြသည်. အဆိုပါအလုပ်စင်တာများအွန်လိုင်းအမည် "CareerOneStop" ကိုသုံးပါ, ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းသင့်ရဲ့ပြည်နယ်သို့မဟုတ်မြို့ဒေသခံတစ်ဦးအမည်အားရှိစေခြင်းငှါ. ဥပမာ, တက္ကဆက်ပြည်နယ်အလုပ်စင်တာများ "လုပ်သား Solutions ။ " ဟုခေါ်ကြသည်မင်နီဆိုတာအလုပ်စင်တာများဟုခေါ်ကြသည် "CareerForce ။ "
ယောဘသည်စင်တာများနည်းလမ်းများစွာ၌သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ, အလုပ်သင်တန်းအစီအစဉ်များရန်သင့်အားသင်တန်းပေးခြင်းသို့မဟုတ်လက်လှမ်းပေးခြင်းအပါအဝင်. တချို့ကအလုပ်အကိုင်အစင်တာများဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအတွက်အထူးအလုပ်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များရှိ! သင့်ရဲ့အနီးဆုံးအလုပ်စင်တာကိုရှာပါ.
Jobcorps sign up ပြုလုပ်ပါ
ယောဘသည် Corps နေသောလူပျိုတို့နှင့်အမျိုးသမီးအခမဲ့ပညာရေးနှင့်အလုပ်အကိုင်အလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များကိုကမ်းလှမ်းတဲ့အစိုးရအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည် 16 သို့ 24 အသက်အနှစ်. လေ့ကျင့်ရေးထိုကဲ့သို့သော CNA အဖြစ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အပါဝင်သည်, သွားဘက်ဆိုင်ရာလက်ထောက်, ဆေးဆိုင်နည်းပညာရှင်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာလက်ထောက်, ကနျြးမာရေးယူနစ်ညှိနှိုင်းရေးမှူး, နှင့်သူနာပြု. Learn more about Job Corps.
ရပ်ရွာကောလိပ်များအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောသင်တန်းများပူဇော်သောသူအပေါင်းတို့သည်အသက်အရွယ်မရွေးအရွယ်ရောက်သူအဘို့ကျောင်းကဖြစ်ကြောင်း. သငျသညျညဦးယံအချိန်အတန်းမှာအင်္ဂလိပ်စာသင်ယူရာမှအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးနှစ်နှစ်သင်တန်းကိုယူပြီးမှဘာမှလုပျနိုငျ. ရပ်ရွာကောလိပ်များအများအပြားအလုပ်လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများရှိ. ကျူရှင်စရိတ်တက္ကသိုလ်များနှင့်ပုဂ္ဂလိကကောလိပ်များထက်အများကြီးနိမ့်များမှာ. တစ်ဦးအသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်ကိုရှာပါ.
တစ်ဦးအလုပ်သင်သူသို့မဟုတ်သူမအလုပ်ဖြစ်တယ်စဉ်ကျွမ်းကျင်မှုသိတော့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်. အလုပ်သင်အလုပ်အပေါ်ကိုလေ့ကျင့်, သူတို့မကြာခဏအချို့စာသင်ခန်းညွှန်ကြားချက်များ, လွန်း. ဥပမာအားဖြင့်ကားများကိုပြုပြင်တာတွေဒါမှမဟုတ်လျှပ်စစ်ဖြစ်ခြင်းများအတွက် - - သင်တိကျတဲ့အလုပ်အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုရှိပါကဤသူသည်သင်တို့အဘို့အကောင်းတစ်ဦးလမ်းကြောင်းကိုဖြစ်ပါတယ်သျောလညျးသငျသေးကျွမ်းကျင်မှုမရှိကြပါဘူး. The US Department of Labor hasalist of apprenticeships.
အဲဒီစာရင်းထဲမှာဖြစ်ကောင်းသာအလုပ်သင်ဖြစ်နိုင်ခြေအနည်းငယ်ဖုံးလွှမ်း. အစဉ်အမြဲအလုပျသမားရှာနေကြသူသငျသညျအနီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှိပါသလား? သူတို့အလုပ်သင်အဖြစ်သင်တို့အပေါ်မှာယူဖို့ဆန္ဒရှိဖြစ်နှငျ့သငျလေ့ကငျြ့ပေးမယ်ဆိုရင်သင်ဟာသူတို့ကိုမေးနိုင်. ခဏခဏ, တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်အလုပ်ကြိုးစားသူန်ထမ်းမဆိုကျွမ်းကျင်မှုထက်အလုပ်ရှင်များဖို့ပိုအရေးကြီးပါတယ်, သူတို့သည်သင့်ကျွမ်းကျင်မှုသင်ပေးနိုငျသောကွောငျ့.
ကြီးမားသောမြို့ကြီးတွေမှာ, ပင်အချို့သောသေးငယ်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်, သငျသညျအသစ်ရောက်ရှိလာသောအလုပျအတှကျလေ့ကငျြ့ပေးကူညီကြောင်းအဖွဲ့အစည်းများတှေ့လိမျ့မညျ. ဒါကပြန်လည်နေရာချထားရေးအေဂျင်စီသို့မဟုတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းဖြစ်နိုင်သည်. ဒါဟာအချို့အလုပ်အကိုင်များအတွက်အသစ်ရောက်ရှိလာသောလေ့တစ်ခုစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်.
ဘော်စတွန်: အဆိုပါ နယူးအင်္ဂလန်၏အင်တာနေရှင်နယ်အင်စတီကျု High-ဝယ်လိုအားဒေသများရှိနှစ်ခုအလုပ်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များကိုကမ်းလှမ်း: တစ်ဦးဧညျ့သင်တန်းအစီအစဉ်နှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုန်ဆောင်မှုလက်မှတ်.
ဗဟိုတက္ကဆက်: မြို့တော် IDEA အရွယ်ရောက်ပြီးသူက high-ဝယ်လိုအားအလုပ်အကိုင်များအတွက်လေ့ကျင့်ကူညီပေးသည်.
ကော်လိုရာဒို: အဆိုပါ အမြိုးသမီးမြားရဲ့ Bean ကိုစီမံကိန်း သူတို့အလုပ်နှင့်ဘဝကျွမ်းကျင်မှုရဖို့အနေဖြင့်ခြောက်သွေ့တဲ့အစားအစာထုတ်လုပ်မှုတွင်လူပေါင်းန်ထမ်း.
မင်နီဆိုတာ: ဝန်ဆောင်မှုအတွက် Communidades ယူနိုက်တက် Latinas (အနှစ်သာရ) အခမဲ့ကမ်းလှမ်း, 9-ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက်လူကြီးများအတွက်ရက်သတ္တပတ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ, ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုလယ်ကွင်း
ဒါ့အပြင်မင်နီဆိုတာအတွက်: အဆိုပါ အဘိဓါန် Hmong အမေရိကန်မိတ်ဖက် High-ဝယ်လိုအားစက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုသင်ပေးဖို့အလုပ်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များကိုကမ်းလှမ်း.
မိန်း: အဆိုပါ နယူးအမေရိကန်ရေရှည်တည်တံ့သောစိုက်ပျိုးရေးစီမံကိန်း လူတွေကလယ်သမားဖြစ်လာကူညီပေးသည်.
utah: အဆိုပါ အမွှေးအကြိုင်မီးဖိုချောင် Incubator ဒုက္ခသည်များအစားအစာထရပ်ကားလုပ်ငန်းရှင်များဖြစ်လေ့.
ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်: Project မှပွဲ အစားအစာဝန်ဆောင်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းဝင်မှဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်လေ့.
ရှေ့ဆက်စဉ်းစားပါ - နည်းပညာအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်ရထား
ယင်းအလိုအရ ဒုက္ခသည် Coding စီမံကိန်း, ယူအက်စ်အေပိုမိုသန်းတစ်ဝက်ထက်ကွန်ပျူတာအလုပ်နေရာလွတ်ရှိပါတယ်! အများအပြားကမြို့ကြီးများရုံအသစ်ရောက်ရှိလာသောအဘို့ကွန်ပျူတာနိုင်တဲ့ coding အစီအစဉ်များရှိ.
သငျသညျပြီးသားရှိသည်သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်မှုသင်ယူဖို့လိုပါလျှင်, ကွန်ပျူတာနှင့်အင်တာနက်လုံခြုံရေးအတွက်လေ့ကျင့်ရေးကိုစဉ်းစား, ထို့အပြင်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးကိုခေါ်. There isahigh demand for people with cybersecurity skills, ထိုသို့အနာဂတျအတှကျကောငျးတဲ့အလုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်. သင်လုပ်နိုင်သည် read more about technology jobs.
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သငျသညျပြီးသားအလုပ်တစ်ခုကျွမ်းကျင်မှုရှိ, ထိုကဲ့သို့သော tile သို့မဟုတ်ပိုက်အဖြစ်, ဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းသို့မဟုတ်သူနာပြု? USA တွင်အများအပြားအလုပ်အကိုင်များများအတွက်, သင်လေ့ကျင့်သင်ကြားနေကြသည်ကိုပြသနေတဲ့လက်မှတ်လိုအပ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌သင်၏အလုပ်လုပျနိုငျ.
သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းရ, သငျသညျဖြစ်ကောင်းစမ်းသပ်သွားရပါလိမ့်မယ်. သင်စမ်းသပ်ယူမတိုင်မီဒီတစ်ခါလည်းအချို့ကိုသင်လေ့ကျင့်ရေးလိုအပ်ပါလိမ့်မည်.
CareerOneStop လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး Finder ကို can help you find the certification you need.
Upwardly ကမ္တာ့ မျက်နှာသစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ re-လက်မှတ်ရကူညီပေးသည်.
အခမဲ့အွန်လိုင်း GED® အတန်းအစား